Chelsea Oo Anfield Road Stadium Ku Garaacday Liverpool, Isla Markaana Xajisatay Hogaanka Horyaalka + Sawirro | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Chelsea Oo Anfield Road Stadium Ku Garaacday Liverpool, Isla Markaana Xajisatay Hogaanka Horyaalka + Sawirro
Laba gool oo ay kala dhaliyeen Gary Cahil iyo Diego Costa ayaa kooxda Chelsea siiyay guul ay ka gaadho Liverpool, iyada oo hogaanka dheeraysatay waxayna haatan 7-dhibcood ka saraysaa kooxda Southampton oo ku soo xigta.
Emre Can ayaa durba beegsaday goolka Chelsea markii uu fursad ku helay daqiiqadii 1-aad ee ciyaarta, John Terry ayay ku dhacday taas oo ka dhigtay in kubaddii koorno u baxdo. Emre Can ayaa daah-furay ciyaarta isaga oo hogaanka u dhiibay Liverpool daqiiqadii 9-aad ee ciyaarta markii uu kubad ka laaday meel ka baxsan diilinta ganaaxa walaw ay kubaddu ku dhacday Cahill taas oo dhinac khaldan u dirtay goolhaye Courtios.
Gary Cahill ayaa bar-baro u keenay kooxda Blues daqiiqadii 14-aad ee ciyaarta markii uu dhamaystiray gool la isku murgay oo goolhaye Mignolet uu si qurux baddan u soo bad-baadiyay madax uu ku riday Diego Costa. Coutinho ayaa si qurux baddan u soo dhex jiidhay xiddigaha khadka dhexe Chelsea, inkasta oo kubaddii uu goolka la beegsaday uu iska soo celiyay goolhaye Courtios, balse lama helin qof ka faa’iidaysta Terry ayaana koorne u saaray daqiiqadii 25-aad ee ciyaarta.
Ramires ayaa kubad ka soo raagay Moreno oo badhtamaha garoonka taagnaa, inkasta oo uu si fudud ugu gudbiyay Oscar oo isna kubadda si qurux baddan ugu dhigay Hazard oo kubadda ku garaacay Johnson. Mar kale Oscar ayaa kubad u khiyaanay Ramires oo isna kubadda si qurux baddan ula galay xerada ganaaxa, Hazard oo taagnaa afaafka hore ee goolka Liverpool ayuu u gudbiyay, balse kubaddii goolka la beegsaday Johnson ayay mar kale ku dhacday.
Ciyaarta qeybteeda hore, Diego Costa iyo Martin Skrtel ayay shaqaaqooyin dhex-mareen, walaw labada xiddig la xasuusto inay isku dhaceen kulan ay xulka Slovakia oo uu hogaamiyo Skrtel ay garaaceen xulka Spain oo uu ka soo jeedo Diego Costa.
Kooxda Liverpool ayaa khaladaad samaynaysa iyada oo khalad ay gashay ay isku day ku samaysay Chelsea, Hazard ayaana ku helay fursad qaali ah, balse kubad uu goolka la beegsaday goolhaye Mignolet ayaa qunyar u qabsaday. Qeybta hore ciyaarta ayaa lagu kala nastay 1-1, iyada oo Liverpool ay kubad haysashada ku saraysay halka Chelsea ay ku saraysay goolka la beegsado.
Qeybtii labaad ayaa la isku soo laabtay Eden Hazard ayaa kubad qurux baddan u gudbiyay Diego Costa, inkasta oo Moreno iyo Lovren ay la hirdameen haddana Costa ayaa sida Baaskiilka kubad ugu laaday goolka Liverpool, balse ma noqon. Raheem Sterling ayaa kubad qurux baddan geesta kala soo galay, inkasta oo uu si qurux baddan uga xariiftamay difaaca haddana goolka ayuu kubad joog hoose la beegsaday balse Courtios ayaa si hal-haleel ah iskaga bad-baadiyay.
Kooxda Chelsea ayaa hogaanka u qabatay ciyaarta markii Azpilicueta uu si qurux baddan u soo jiidhay Coutinho, si qurux baddan ayuu kubad joog sare u keenay, Mignolet ayaa kubad ka khalday Oscar oo madaxee is lahaa balse Diego Costa ayaana ka fa’iidaystay oo darbad culus gool ugu bedalay kooxdiisa.
Branden Rodgers ayaa sameeyay saddex bedal markii uu garoonka soo galiyay Allen, Lambert iyo Borini, wuxuuna ka saaray ciyaarta Balotelli, Coutinho iyo Emre Can. Kabtan Steven Gerrard ayaa sameeyay isku day qurux baddan markii uu kubad ka laagay banaanka xerada ganaaxa balse Gary Cahill ayaa gacanta ku taabtay, walaw aan loo tix-gelin. Ugu dmabeyntiina Chelsea ayaa ku badisay 2-1, kulan ka dhacay Anfield iyada oo hogaanka dheeraysatay 7-dhibcood ayayna ka sara martay Southampton oo goor dhaw la ciyaaraysa kooxda Liecester City.
Rikoodhkii guuldaro la’aanta Chelsea ayaan welli la jabin iyada oo kooxda ay la ciyaartay dhamaan afartii kooxood ee ugu waa weynaa horyaalka Ingiriiska waxayna ka heshay 8-dhibcood.